musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » USA Kuputsa Nhau » Shanduko yemamiriro ekunze inotyisidzira kugadzikana kwemari kweUS
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Hurumende Nhau • nhau • vanhu • Kutarisirwa • Sustainability News • Technology • ushanyi • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • USA Kuputsa Nhau
Shanduko yemamiriro ekunze inotyisidzira kugadzikana kwemari kweUS.
Financial Stability Oversight Council inozivisa shanduko yemamiriro ekunze sechinhu chiri kubuda uye chiri kuwedzera kutyisidzira kugadzikana kwemari kweUnited States.
Kusagadzikana Kwemari Kanzuru Yekutarisa inoburitsa mushumo uye kurudziro nezve njodzi yemamiriro ekunze ine chekuita nemamiriro ekunze.
Kuchinja kwemamiriro ekunze idambudziko riri kubuda uye riri kuwedzera kuhurongwa hwemari hweAmerica hunoda chiito.
Chirevo cheFSOC uye kurudziro zvinomiririra danho rekutanga rakakosha kuita kuti hurongwa hwedu hwezvemari hugadzirire kutyisidzira kwekushanduka kwemamiriro ekunze.
Iyo Financial Stability Oversight Council (FSOC) yakaburitsa chirevo chitsva ichipindura Mutungamiriri Biden's Executive Order 14030, ine chekuita neMamiriro Ekunze Dambudziko reMari. Kekutanga, FSOC yaona shanduko yemamiriro ekunze sechinhu chiri kubuda uye chiri kuwedzera kutyisidzira kugadzikana kwemari yeUS.
Chirevo ichi pamwe nemazano anoperekedza anoratidza kuzvipira kweFSOC kuvaka uye nekukurumidza kuedza kuripo kuchinja kwemamiriro ekunze kuburikidza nekongiri kurudziro yenhengo dzenhengo ku:
Ongorora njodzi dzine chekuita nemamiriro ekunze kune kugadzikana kwezvemari, kusanganisira kuburikidza nekuongororwa kwemamiriro ezvinhu, uye kuyera kudiwa kwemitemo mitsva kana yakagadziridzwa kana kutungamira kwekutarisa kune njodzi dzemamiriro ekunze dzakanangana nemamiriro ekunze.
Simbisa kuburitswa kwakanangana nemamiriro ekunze kupa vatyairi uye vanotengesa vatori vechikamu ruzivo rwavanoda kuti vaite zvisarudzo zvine ruzivo, zvinozobatsirawo vatongi nemasangano emari kuongorora nekugadzirisa njodzi dzine chekuita nemamiriro ekunze;
Simbisa inoitika inoenderana neyemamiriro ekunze dhata kubvumidza zvirinani kuyerwa nenjodzi nevatongi uye mune yakazvimiririra chikamu; uye
Vaka kugona uye hunyanzvi kuti uve nechokwadi chekuti njodzi dzine chekuita nemamiriro ekunze dzakatarwa nekugadziriswa.
"Kuchinja kwemamiriro ekunze inyonganiso iri kubuda nekuwedzera kune vezvemari vekuAmerica inoda kuti zviitwe, ” Munyori weTreasury Janet L. Yellen akadaro. "Chirevo cheFSOC pamwe nemazano zvinomiririra danho rekutanga rakakosha pakuita kuti hurongwa hwedu hwezvemari hurambe huchigona kutyisidzira shanduko yemamiriro ekunze. Matanho aya achatsigira danho rekukurumidzira, rehurumende rose pamusoro pekushanduka kwemamiriro ekunze uye kubatsira hurongwa hwemari kutsigira shanduko yakarongeka, yehupfumi hwese kusvika kuchinangwa chekuburitsa net-zero.
Dan Pimental Financial Services anoti:
Mumushumo wakarairwa neMutungamiriri wenyika, VaJoe Biden, iyo Financial Stability Oversight Council yakakurudzira vatori vechikamu mumusika, makambani everuzhinji, uye vanodzora . Naivo pachavo, njodzi dzehupfumi kana dzemari dzine chekuita nemamiriro ekunze hazvidi kukanganisa kugadzikana kwemari; hupfumi hunogona kuwana kudzikira kwezvinobuda.